မိခင်နဲ့အတူ စားဝတ်နေရေးအတွက် စီးပွားရေးလေးတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေကြောာင်း ရှင်းပြလာတဲ့ အစ္စဏီရဲ့ဗီဒီယိုလေး – Cele Posts
အစ္စဏီက အဆိုတော်ကောင်း တစ်ယောက်ပါ။ ယခင်ကနေခုချိန်ထိ သူရဲ့သီချင်းတွေက ‌ကျော်ကြားနေဆဲဖစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမှား တစ်ခုကြောင့်ထောင်ကြ ခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောလေးကမှ ထောင်က လွတ်လာတာပါ အခုဆိုသူက ဘဝကိုအကောင်းဆုံဖြတ်သန်းနေပါပြီ။သူအထဲမှာနေခဲ့ရတုန်းက သူ့မိခင်မှာ အမြဲနာကျင်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခင်နဲ့အတူ အလုပ်ဝေဝိုင်းကူလုပ်ရင်းဘဝကို ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။သူက အလှူအတန်းတွေ မှာလဲရက်ရောတဲ့ စိတ်ရှိကြောင်း Mideaတစ်မှာ “အမှားတစ်ခုလုပ်မိလို့ခုလိုဖြစ်ရပေမယ့် လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတန်းတွေလဲတတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားချင်တာပေါ့”ဆိုပြီးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ် အစ္စဏီကအခု သားအမိနှစ်ယောက် စီးပွားရေးကို စတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကိုလဲ ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ “ကျွန်တော်အမေ က ဟင်းချက် အရမ်းကောင်းတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ ၂ယောက် စီးပွားရေး လုပ်မှာ ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ မေကြီးလက်ရာ ဆိုပြီး စီးပွားရေး တစ်ခု ကိုစလုပ် ခဲ့တာပါ
ကျွန်တော် အထဲ မှာတုန်းက အမေ ရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာ ကို အရမ်းလွမ်းတယ်. အမေ ဟင်းချက် ပို့တဲ့နေ့ဆို ပို့တဲ့ဟင်းတွေကို တစ်နေ့တည်း ကုန်အောင်စား ပစ်တာမျိူးရှိတယ် ပရိသတ်တွေက မေကြီးလက်ရာ ကို အားပေးချင်တယ်ဆိုရင် မေကြီးလက်ရာ fb မှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့သတင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
မိခငျနဲ့အတူ စားဝတျနရေေးအတှကျ စီးပှားရေးလေးတဈခုကို လုပျကိုငျနကွေောာငျး ရှငျးပွလာတဲ့ အစ်စဏီရဲ့ဗီဒီယိုလေး
အစ်စဏီက အဆိုတျောကောငျး တဈယောကျပါ။ ယခငျကနခေုခြိနျထိ သူရဲ့သီခငျြးတှကေ ‌ကြျောကွားနဆေဲဖဈပါတယျ။သူရဲ့အမှား တဈခုကွောငျ့ထောငျကွ ခဲ့ပါတယျ။လတျတလောလေးကမှ ထောငျက လှတျလာတာပါ အခုဆိုသူက ဘဝကိုအကောငျးဆုံဖွတျသနျးနပေါပွီ။သူအထဲမှာနခေဲ့ရတုနျးက သူ့မိခငျမှာ အမွဲနာကငျြဝမျးနညျးနခေဲ့ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခငျနဲ့အတူ အလုပျဝဝေိုငျးကူလုပျရငျးဘဝကို ဖွတျသနျးနပေါတယျ။သူက အလှူအတနျးတှေ မှာလဲရကျရောတဲ့ စိတျရှိကွောငျး Mideaတဈမှာ “အမှားတဈခုလုပျမိလို့ခုလိုဖွဈရပမေယျ့ လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတနျးတှလေဲတတျနိုငျသလောကျ လုပျသှားခငျြတာပေါ့”ဆိုပွီးပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ အစ်စဏီကအခု သားအမိနှဈယောကျ စီးပှားရေးကို စတငျလုပျကိုငျဖွဈတဲ့အကွောငျး ကိုလဲ ရှငျးပွထားပါသေးတယျ။ “ကြှနျတျောအမေ က ဟငျးခကျြ အရမျးကောငျးတယျ အဲဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ သားအမိ ၂ယောကျ စီးပှားရေး လုပျမှာ ဖွဈတော့ မှာမို့လို့ မကွေီးလကျရာ ဆိုပွီး စီးပှားရေး တဈခု ကိုစလုပျ ခဲ့တာပါ
ကြှနျတျော အထဲ မှာတုနျးက အမေ ရဲ့ ဟငျးခကျြလကျရာ ကို အရမျးလှမျးတယျ. အမေ ဟငျးခကျြ ပို့တဲ့နဆေို့ ပို့တဲ့ဟငျးတှကေို တဈနတေ့ညျး ကုနျအောငျစား ပဈတာမြိူးရှိတယျ ပရိသတျတှကေ မကွေီးလကျရာ ကို အားပေးခငျြတယျဆိုရငျ မကွေီးလကျရာ fb မှာ အားပေးနိုငျပါတယျ”ဆိုတဲ့သတငျးကို မြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော။